Maxay Tahay Istaraatiijiyadda Isku-xirnaantaadu Ay kuu Khasaareysaa | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 8, 2010 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan goobjoog ka ahaa Soosaarayaasha, Dhacdo isku xirnaan heer gobol oo heer sare ah oo isku dhaf ah ku hadla weyn oo ay ku xigto xiriir firfircoon oo lala yeesho xirfadlayaasha teknolojiyadda ee gobolka. Qofka hadlay toddobaadkan wuxuu ahaa Tony Scelzo, aasaasihii Roob sameeyeyaasha - ururka waalidka ee loo yaqaan 'Techmakers'.
Tony iyo waxaan wadaageynaa xamaasadeena isku xirnaanta - khadka toosan iyo anigaba khadka tooska ah. Wuxuu awooday inuu dhiso shabakad aan caadi aheyn oo ka badan 1,700 xubnood halkan gobolka hadana wuxuu kusii fidayaa heer qaran. Waxaan dareemayaa sidii aan u dhisay shabakad aan caadi aheyn oo khadka tooska ah ah… laakiin sii wad inaad barato tan ku saabsan isku xirka Tony.
Mid ka mid ah furayaasha bandhigga Tony waa taas 80% macaamiishaada cusub kama iman doono shabakaddaada degdegga ah. Dad aad u tiro badan ayaa ku biira shabakadaha waxayna kaqeyb galaan shirarka ama dhacdooyinka rajada ka qaba inay la baxaan kaararka rajada. Xaqiiqdu waxay tahay in isku xirnaanta ay u baahan tahay wax ka badan hal istiraatiijiyad - Tony wuxuu u kala jebiyey afar:
Afar Istaraatijiyad Xiriirineed
Silsilada Cuntada - miyaad ku xidhan tahay xirfadlayaal kale oo u adeega isla dhagaystayaasha? Kuweena hay'adda, Xirfadleyda IT, qareenada, xisaabiyeyaasha, maalgashadayaasha, iwm waa kuwa kale oo jooga silsiladda cuntada. Waxaan u baahanahay inaan sii wado xiriirka aan la leeyahay dadkaas si ay macaamiisha ugu diraan ururkeena.
Events - miyaad ka warqabtaa dhacdooyinka ku dhaca gudaha urur sababa kicinta bannaan ee alaabtaada ama adeeggaagu buuxin karo? Hay'addeena, munaasabadda seddex ka mid ah macaamiisheenna muhiimka ah waxay noqotay Sarkaalka Suuqgeynta Sare ama VP ee Suuqgeynta. Waxaan u baahanahay inaan ka digtoonaanno marka suuqgeyntu gacmaha isku dhaafsaneyso shirkadaha si aan u joogno si aan u caawino hoggaanka cusub.
Saameyn / Go'aan sameeye - yaa saameyn ku leh? Mararka qaarkood waa milkiilaha ganacsiga laakiin marar badan waxaa jira dad ka shaqeeya waaxyo saameyn weyn ku leh iibsashada dibadda ee shirkadda ama shaqaalaynta. Anaga ahaan, kuwani waxay noqon karaan kuwa horumariya, injineerada iibka ama xitaa agaasimaha guud. Waa muhiim inaan xiriir la yeelano dadkaas si aan ugu helno horudhac diiran gudaha waqti ka waqti.
Niche - ku dhowaad shirkad kasta waxay leedahay nook ay si fiican uga dhex shaqeeyaan. Kuweena waa tiknoolajiyad iyo softiweer ahaan adeegyo ururada iyo shirkadaha maalgashiga ku sameeya. Sababtoo ah hay'addeennu waxay leedahay waayo-aragnimo badan oo SaaS ah, waxaan fahamsanahay luqadda iyo howlaha gudaha ee shirkadahaas - marka awooddeenna aan ku fulin karno istiraatiijiyaddu kama gaabineyno barashada qaabka ganacsiga ama howlaha gudaha ee hay'adahaas. Waxaan si fudud u garaacnay dhulka socda.
Waxaa jira seddex talaabo oo aad ka codsan karto shabakadaada - isbarasho, gudbin iyo talooyin. Waxay kuxirantahay xiriirkaaga xiriirka koowaad, haka waaban inaad codsato nooca saxda ah… talobixin kaliya oo ka imaaneysa xiriirka ugu xoogan.
Markaad ka fekereyso shabakaddaada internetka iyo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee aad rabto inaad gaarto, miyaad tixgelinaysaa isku xirayaashan sare? Waa inaad noqotaa!
Oktoobar 12, 2010 at 7:19 AM
Qoraal wacan, Doug. Isku-xidhka fool-ka-fool waa cilmi iyo farshaxan labadaba. Soo koobitaankii Tony 'Scelzo ee afarta ilood ee ganacsi ee ixtiraamsan ayaa i xasuusinaysa inaan marwalba u baahanahay inaan raadiyo:
-Xirfadlayaal kale oo ugu yeera isla macaamiisha aan karayo ee aan sameeyo
- Dhacdooyinka sababa macaamiisha suurtogalka ah inay u baahdaan adeegyadayda
- Bani'aadamka go'aan ka gaadha in lacag lagu bixiyo adeegyadayda, oo ay weheliyaan saamileyaal warshadeed - Kan ayaa adag; badiyaa waa dad gebi ahaanba ka duwan oo ku hadla "gebi ahaanba" luqad ka duwan kuwa isticmaala dhammaadka adeegyadayda.
Noocyada gaarka ah ee shirkadaha iyo dadka ku dhex jira taas ayaa sida ugu badan uga faa'iideysta adeeggeyga.
Tani way iska cadahay, laakiin ma sahlana. Laakiin adeegsiga saynisyahan isku xidhka ujeedka fool ka foolka ah ayaa fure u ah ganacsi badan.
Jeffrey Gitomer wuxuu leeyahay: wax walba oo siman, dadku waxay ka iibsadaan dadka ay jecel yihiin. Wax walba oo aan loo sinnayn, dadku wali waxay ka iibsadaan dadka ay jecel yihiin. Tiknoolajiyada suuqgeynta, otomatiga oo lagu daro isku xirka (isdhexgalka aadanaha) guul isku mid ah.
Oktoobar 12, 2010 at 8:34 AM
Akhris Wanaagsan! Waxay u egtahay kulankeena iibka ee aan yeelanay usbuucii hore. 🙂